Olee otú wụnye OS X Mavericks si ọkọ na Mac | Esi m mac
Etu esi wụnye OS X Mavericks site na ncha
Jordi Gimenez | | Mac OS X, OS X Mavericks, Nkuzi
Ihe mbụ anyị nwere ike ikwu tupu launching mepụta a efu mweghachi nke anyị Mac na Ya mere kpochapụ ihe niile o nwere, bụ ịgwa anyị ma ọ bụrụ na anyị na Mac bụ dakọtara na a version nke OS X ulo oru ụnyaahụ site Apple na ọ bụrụ na ọ bụ dakọtara na anyị nwere ike ikwu mee nkwado ndabere nke data niile dị anyị mkpa dị ka foto, veranda iPhoto, faịlụ, ozi ịntanetị, wdg, ma ọ bụ iji Time Machine ma ọ bụ na mpụga mpụga ọzọ. Anyị ekwuola ụfọdụ maka usoro ndị gara aga na post gara aga ma anyị kwadoro ọgụgụ gị tupu ịmee ihe ọ bụla na Mac anyị.
Ozugbo akwadochara data anyị, anyị chọrọ ngwaọrụ USB nwere opekata mpe 8GB iji mepụta nke anyị Ihe nkwụnye OS X Mavericks. Ọfọn, ugbu a ka anyị hụ ihe ndị na-esote iji wụnye 'dị ọcha' sistemụ arụmọrụ.
1 Kwadebe USB
2 Ntinye nke sistemụ arụmọrụ anyị
Ihe mbụ anyị ga - eme bụ ibudata OS X Maverics n'efu ma ka ọ na - ebudata anyị nwere ike ịkpụzi USB na aha anyị chọrọ n'ọnọdụ m (USBMAVERICKS) wee kanye akara na ndọpụta dịka Mac OS Plus (Njikọ) ma nabata.
Mgbe ahụ, anyị ga-enweta Terminal ma tinye iwu ndị a:
sudo / Ngwa / Wụnye OS \_ X \_ Mavericks.app/Contents/Resources/createinstallmedia –volume / Volume / USBMAVERICKS –applicationpath / Ngwa / Wụnye OS \_ X \_ Mavericks.app –nointeraction
Na ederede ederede aha USBMAVERICKS na onye ọ bụla tinye aha o nyere USB ya.
Ntinye nke sistemụ arụmọrụ anyị
Ugbu a, anyị ga-ejikọ USB wee bido Mac anyị site na ịpị igodo alt mgbe ọ na-agba akpụkpọ ụkwụ.
Mgbe buut a anyi ga - acho USB anyi, n’okwu a USBMAVERICKS na họrọ 'Disk Utility'. Ugbu a, anyị ga-eme nhazi nke draịvụ ike anyị ma maka nke a, anyị ga-pịa taabụ 'hichapụ' ma mgbe anyị mechara hụ na usoro ahụ Mac OS Plus (Njikọ) anyị hichapụ ya.
Ozugbo anyị nwere draịvụ draịva, naanị anyị ga-emechi 'Disk Utility' wee laghachi na 'OS X Utilities' ebe anyị ga-pịa 'Wụnye OS X' na draịvụ ike ma ọ bụ nkebi anyị chọrọ iji tinye OS X Mavericks.
Ugbu a, naanị anyị ga - ahazi Mac anyị ma nwee ọ updateụ maka mmelite a anaghị akwụ ụgwọ maka mmadụ niile
Ozi ndị ọzọ - Gịnị ka m kwesịrị ime tupu emelite m Mac ka OS X Mavericks?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mac OS X » OS X Mavericks » Etu esi wụnye OS X Mavericks site na ncha
M arụnyere na ọkọ, mana enweghị m ike ịgbalite "chọta m mac" ebe ọ na - agwa m na ngalaba mgbake dị mkpa anaghị adị ... ị maara otu esi edozi ya?
Ihe ngwọta bụ ịtinye OS X Mavericks. Daalụ
Jordi, wụnye ọzọ n'elu nke ugbua arụnyere na-enweghị iji disk ịba uru ọzọ ihichapu ihe ọ bụla? M nwere otu nsogbu dị ka Rodrigo na Chọta m Mac na mgbake nkebi. Daalụ
Zaghachi ka Raul Montero Lombao
Ezi Raul, ọ kachasị mma ịwụnye site na ncha ọzọ na-ekwughachi usoro ntinye dị ọcha nke mere na ọ na-emepụta nkebi ahụ na akpaghị aka, mana ọ bụrụ na ịchọghị ịwụnye ihe niile ọzọ, ị nwekwara ike ịme ihe enyi IVANVALO44 na-ekwu
wụnye ọcha sistemụ ga-ehichapụ ihe niile, ọ dakwara m .. na nke ị na-eme ka ọ dị ọcha .. ugbu a ị ga-etinye nwụnye MAVEICKS DEVELOPER PREVIEW RECOVERY UPDATE…. http://api.viglink.com/api/click?format=go&key=c6684b5502fa2a415a104d824988c196&loc=http%3A%2F%2Fforums.macrumors.com%2Fshowthread.php%3Ft%3D1609078&v=1&libId=312fe481-1c35-4d62-9030-8ce7d760ce6d&out=http%3A%2F%2Fswcdn.apple.com%2Fcontent%2Fdownloads%2F28%2F11%2F091-7243%2Fzlkpbgq4vljwzzkg18dbpopxz89kjxt8qo%2FRecoveryHDUpdate.pkg&ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com.mx%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D2%26ved%3D0CDgQFjAB%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fforums.macrumors.com%252Fshowthread.php%253Ft%253D1609078%26ei%3DEQpoUuzCLunm2gXQlIHACQ%26usg%3DAFQjCNECJ-t9BfpB9UlgVO2QFKgpVfyfSg%26sig2%3DJEloXgqiQOH7a1GAaOf9zA&title=Mavericks%20Recovery%20Update%201.0%20-%20MacRumors%20Forums&txt=RecoveryHDUpdate.pkg%20(11.%20July%202013)&jsonp=vglnk_jsonp_13825682502166
Danloduo ya ka ikwunye ya ma dikwa ya…. EBERE M KWEE GI NWAPUTA NA IHE NA-EME .. MGBE YOU NA-AGA APPTORE, Ọ GA-EME KA Ọ B V N'ERSLỌ NT ANDTA 1.0 ma kwadebe ihe niile dị ọcha iji nwee obi ụtọ. Ọ D NEGH NE mkpa ịmaliteghachi
Zaghachi na IVANVALO44
Mgbe m kwalitere na Mavericks facebook akara ngosi vidiyo furu efu. Kedu ihe m ga - eme banyere ya?
Ndewo na olee otu anyi si eme Bootcamp nkebi?
Ọ bụrụ na ị weghachi site na ncha ị ga-eweghachi nkebi. May nwere ike ịchọpụta na ọ bara uru karịa 'nweta nkwalite'. Daalụ
Zuru oke nkuzi, mavericks na - akwụghị ụgwọ
Onwere onye mara ka m si eke USB iji wunye mavericks, site na Windows I hope ha nwere ike inyere m aka biko
iMessage anaghị ebu m ọ na-ekwu «Enweghị ike ijikọ. Biko lelee njikọ netwọk gị wee nwaa ọzọ. » Etinyere m ya na ọkọ ma amaghị m ihe m ga - eme: S
Koodu ahụ ezighi ezi. N'ụzọ a, ha ga - enweta ozi nke "sudo: / Ngwa / Wụnye: iwu ahụghị"
sudo / Ngwa / Wụnye OS X Mavericks.app/Contents/Resources/createinstallmedia –volume / Volume / USBMAVERICKS –applicationpath / Ngwa / Wụnye OS X Mavericks.app –nointeraction
… Ma n'ezie, gbanwee USBMAVERICKS maka ihe ọ bụla ịchọrọ.
Ikwu e zubere iwe iwe, OK?
ọ dịghị ihe dijo
dị ka Karl na-ekwu na ọ na-arụ ọrụ, dị ka nke a post ahụ anaghị arụ ọrụ Corregios
anyị kwesịrị inye Karl nwa nwoke ọnụ!
Gbazie, ekele maka ọkwa
Ndewo kedu ka unu mere, a nweela m nsogbu na Mavericks, ọ bụrụ na ị nwere ihe ngwọta ọ bụla biko kọwaa ya.
Mgbe m gara ebe ngosi ahụ, bọtịnụ òkè anaghị apụta, ụnyaahụ ọ bụ ntinye m na Mountain Lion na ihe niile zuru oke ugbu a agbanyere m Macbook Air 2013 13 ″ ọzọ, bọtịnụ ndị a anaghị egosipụta, m dokwara anya. , M na-ama ọrụ ebe ọ bụ na usoro mmasị na ihe ọ bụla. M na-eche echiche ịtinye usoro ahụ.
M ga-enwe ekele maka ngwọta ma ọ bụ nkọwa ọ bụla
Enwere m ajụjụ m dị ọhụrụ na mac ma enwere m 10.7.5 sistemụ arụmọrụ na achọrọ m ịwụnye maverick mana amaghị m otu esi eme ya, ọ naghị ebudata m na ngwa ahụ. onye nwere ike inyere m aka?
Ndewo Joaquin, ihe nbudata ndị ọzọ na-arụ ọrụ ziri ezi maka gị? ya bụ, ị nwere ike ibudata ngwa ndị ọzọ na ụlọ ahịa ahụ?
Ndewo, gịnị kpatara na enweghị m ike ịkpọ oku vidiyo ebe m wụnye OS X MAVERICKS?
Ọ ga-aka mma iwepụ ya?
Zaghachi na Ckaroly
Enweghị m ike ịgbalite nhọrọ nhichapụ n'ezie?
N'ehihie jagtri, aghọtaghị m ajụjụ a.
Ndewo Jordi, ọ bụrụ na m nwere usoro agụ owuru snow, enwere m ike imelite ya na mavericks?
Ndewo Moni, ọ dabere na ụdị Mac gị ma ọ bụghị na sistemụ arụmọrụ ị tinyere ugbu a. Ma ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ị ga-enwe ike imelite.
Gịnị Mac ị na-eji ugbu a?
mgbe m na-agba ọsọ iwu ahụ
Ha na aju m pwd ... aro obula?
Zaghachi na nkịta
mavericks apụtaghị maka nbudata….
Ọ bụrụ na m wụnye mavericks site na ncha na Yosemite ugbu a, enwere m ike ịgbake ngwa ndị m tinyere na Yosemite (arụnyere mana anaghị azụrụ m id ugbu a)
Banyere. M zụtara iMac nke na-abịa tupu arụnyere na Yosemite. Ma o doro anya na ị pụghị ịgbada Mavericks. Onwere onye mara ma nke a bu eziokwu? Agbalịrị m ịwụnye ya na diski mpụga mana m ga-enweta akara a na-agaghị ekwe na kọmputa malitegharịa ọzọ. Achịkwa
My iMac bụ 5k Retina 27-anụ ọhịa kacha ọhụrụ 2014
Hoal, ị chọtara ihe ngwọta ọ bụla iji wedata akụrụngwa nke arụnyere Yosemite na ụlọ ọrụ mmepụta ihe? Na mbu, ekele.
Kedu otu esi arụ ọrụ Mac Pro ọhụrụ? Can nwere ike ịhụ ya na vidiyo
Wụnye Mavericks OS X site na ncha. Ntinye "dị ọcha" na USB